လှိုင်သီရိအိမ်ရာ သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမှ စွပ်စွဲခံသုံးဦး ရှေ့နေမငှားနိုင်သဖြင့် နိုင်? - Yangon Media Group
လှိုင်သီရိအိမ်ရာ သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမှ စွပ်စွဲခံသုံးဦး ရှေ့နေမငှားနိုင်သဖြင့် နိုင်?
လှိုင်သီရိအိမ်ရာ သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ စွပ်စွဲခံဇွဲလင်းထက်နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့မှာ ရှေ့နေမငှားနိုင်သဖြင့် ဥပဒေရုံးထံအကြောင်းကြားရန်နှင့် နိုင်ငံ တော်က ရှေ့နေငှားပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း တရားသူကြီးက ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ စွပ်စွဲခံဇွဲလင်းထက်နှင့် ပါဝင်သူ ၎င်း၏ဇနီးနှင့် မိခင်တို့ကိုရုံးထုတ်ရာတွင် ၎င်းတို့သုံးဦးမှ ရှေ့နေမငှားနိုင်ကြောင်းပြောသဖြင့် ဥပဒေရုံးထံအကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ရန် ယင်းအမှုကိုစစ် ဆေးမည့် တွဲဖက်ခရိုင်တရားသူ ကြီး(၄) မှညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
အသတ်ခံရသူ ဒေါ်ကေသီလှိုင်၏ ခင်ပွန်းဦးလှမျိုးထွန်းက”စွပ်စွဲခံတွေဘက်ကနေ ရှေ့နေ ငှားပါမယ်လို့ တရားသူကြီးရှေ့မှာ တောင်းဆိုတဲ့အတွက် ဒီနေ့ရုံးချိန်းကိုပြန်ချိန်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ရုံးရောက်လာတော့ ရှေ့နေပါမလာဘူး။ တရားသူကြီးကိုလည်း သူတို့ပြောတယ်။ ရှေ့နေငှားဖို့အဆင်မပြေပါဘူးလို့။ ဒါဆို ရင် ဥပဒေရုံးကိုအကြောင်းကြား ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကနေငှားပေး လိမ့်မယ်လို့ တရားသူကြီးကပြောတယ်”ဟု ရုံးချိန်းအပြီးတွင် မီဒီယာသမားများ၏မေးမြန်းမှုကို ဖြေ ကြားခဲ့သည်။ ရုံးချိန်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန် နဝါရီ ၉ ရက်သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့ ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ ကြိုးစားသွားမည်ဟု ဦးလှမျိုးထွန်းက ပြောသည်။
”ဥပဒေကြောင်းအရအမှုက တရားရုံးလမ်းကြောင်းဆိုတော့ ပြောင်းလဲပေးလို့မရဘူး။ သူ့ဟာ သူစစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာက ကျွန် တော်ပြောချင်တဲ့အချက်အလက် တွေ၊ ထပ်ပြီးဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာတွေကို ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရကြိုးစားသလို အပြင်မှာလည်း ကျွန် တော့်နည်းကျွန်တော်ဟန်နဲ့ စုံစမ်း နေပါတယ်။ သိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို တရားရုံးမှာတင်ပြခွင့်မရဘူးဆိုရင် အပြင်မှာတခြားနည်းလမ်းနဲ့တင်ပြပါမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေကို အရင်တင်ပြမယ်။ တင်ပြလို့မရဘူးဆို ပြည်သူလူထုကို ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာတွေကို အမှန်တိုင်းပဲချပြရပါလိမ့်မယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားလိုပြသက်သေအနေဖြင့်ထည့် သွင်းထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်ညပိုင်းက လှိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် လှိုင်သီရိအိမ် ရာတိုက်(၃)ရှိ အခန်းအမှတ်(၅ဝ၃) ၌ အပုပ်နံ့ထွက်နေသည့်အဝါရောင် အရည်များကျဆင်းနေကြောင်း သတင်းအရသက်ဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ နေအိမ်အတွင်းတိုက်ခန်းကြမ်း ပြင်ပေါ်တွင် ဒေါ်ကေသီလှိုင်(၄ဝ) နှစ်( STAY& WHILE စား သောက်ဆိုင်မန်နေဂျာ) ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ တတိယတန်းကျောင်းသူ မသာယာထွန်း(၉)နှစ်နှင့် ဆိုင်မှစာရင်းကိုင် ဒေါ်အေးမာဦး(၂၅) နှစ်တို့ ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဇွဲလင်းထက်ကိုစစ်ဆေးရာမှ အဆိုပါအမှုအားကျူးလွန်ခဲ့ ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဇွဲလင်းထက်က နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်စောစောတွင် ဆိုင်မန် နေဂျာဒေါ်ကေသီလှိုင်၏နေအိမ် တိုက်ခန်းသို့ရောက်ရှိလာပြီး လစာတိုးပေးရန်ကိစ္စပြောဆိုရာ ဒေါ်ကေသီလှိုင်ကလစာတိုးမပေးနိုင်သေး ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ရာမှ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများပြီး ခိုက်ရန်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်ကေသီလှိုင်မှ အိမ်ခန်းအတွင်းရှိဓားဦးချွန်ကိုယူပြီးထိုးမည်ပြုလုပ်သဖြင့် ဓားကိုလုယူကာ ဒေါ်ကေသီလှိုင်အားထိုးခဲ့သည့်အပြင် ဒေါ်အေးမာဦးကိုလည်းဓား ဖြင့်ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေစဉ် ဒေါ်ကေသီလှိုင်၏ သမီးဖြစ်သူ မသာယာထွန်းမှ ဝင်ရောက်တားမြစ်သဖြင့် မသာယာထွန်းကိုလည်း ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ကြောင်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ ယင်းအမှုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့ပြီးရာကြီး အမှုအမှတ်-၁၅၇/၂ဝ၁၇ ဖြင့် တွဲဖက်ခရိုင်တရားသူကြီး(၄) တရား ခွင်တွင်စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၏ နိုင်ပွဲဆက်စံချိန်ကို ချိုးဖျက်ရန် မစဉ်းစားကြောင်း စတာလင်း ဆို